Wireless Charger, Fast Charger ho an'ny Android - Lantaisi
Ny orinasanay dia nohamarinina ho mpanamboatra voamarina MFI mpikambana ao amin'ny Apple. Amin'izany fotoana izany, mpanamboatra mpikambana WPC sy USB-IF izahay. Ny ankamaroan'ny charger tsy misy tariby dia nandalo QI, MFI, CE, FCC, RoHS fanamarinana.
Lantaisi / Fanaraha-maso kalitao
Ny ekipan'ny Lantaisi dia mikatsaka hatrany ny vokatra avo lenta, tsy misy kilema, azo antoka ary miaro ny tontolo iainana. Ny fanomezan-toky ny mpanjifa no filozofianay momba ny fandraharahana, noho izany dia manana fanaraha-maso hentitra ny kalitaon'ny vokatra izahay.
Lantaisi / Fampandrosoana tetikasa
Manolotra vahaolana mahazatra sy fampandrosoana ho an'ny vokatra fiampangana tsy misy tariby izahay, ary afaka mamita ny tetikasa toy izany ao anatin'ny volana vitsivitsy-fantatsika fa zava-dehibe ny fahafahana mamaly ny fironana amin'ny tsena ao anatin'ny fotoana fohy.
Lantaisi / System Chain Supply
Manana rafitra famatsiana feno izahay: SMT, fitaovana R&D, fitaovana famokarana, fitahirizana sy fitaterana, sns.
Lantaisi / Teknika
Manana famolavolana vokatra matihanina sy ekipa R&D izahay, ary mahafehy ny teknolojian'ny vokatra mandroso sy manapaka. Manompo orinasa manerana izao tontolo izao izahay mifanaraka amin'ny fitsipika mifototra amin'ny teknolojia sy kalitao.
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd. dia nojerena ho mpanamboatra voamarina MFI mpikambana ao amin'ny Apple. Amin'izany fotoana izany, mpanamboatra mpikambana WPC sy USB-IF izahay. Ny ankamaroan'ny charger tsy misy tariby dia nandalo QI, MFI, CE, FCC, RoHS fanamarinana.
Charger fiara tsy misy tariby andriamby CW12
Karazana andriamby Wireless Charger SW12
Mijoroa karazana Wireless Charger DW08
Mijoroa karazana Wireless Charger AW01
Charger Wireless karazana Desktop AW01
Karazana andriamby Wireless Charger MW01
Mijoroa karazana Wireless Charger SW08S
Test & Tombano
06 Novambra 2021
Raha fintinina, tsy azo ampiasaina miaraka ny fiampangana tsy misy tariby sy ny fiampangana tariby. Raha mampiasa famandrihana an-tariby sy famandrihana tariby ianao mba hamenoana ny findainao amin'ny fotoana iray, dia havadika ho fiampangana tariby aloha izany. Fanazavana fanampiny, azafady mba mifandraisa aminay.
04 Novambra 2021
Rehefa avy nanandrana ireo fomba 5 voalaza etsy ambony ireo dia mbola tsy azo ampangaina ny batterie, izany hoe misy olana amin'ny fitaovana, ny dikan-teny taloha an'ny iOS dia mety tsy manohana tsara kokoa ny fiampangana tsy misy tariby iPhone, afaka manandrana manavao ny iPhone amin'ny iOS farany isika. ny version na ny telefaonina dia azo alefa any amin'ny hea...